ADVISORY BOARD - GSM Business Solutions
Phone: +252611100850 | Mogadishu, Somalia
Isku Xerida Ganacastada
Mohamed A. Mohamed MBA, CFE, CICA
Mudane Maxamed oo hadda ah Maareeyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya, waxaa kale uu hore soo qabtay jagada Agaasimaha Hawlgalka Maaliyadda, Xafiiska Maareynta Maaliyadda iyo Kheyraadka Dowladda ee Degmada Columbia, Washigton D.C. Wuxuu khibrad iyo waayo’aragnimo farabadan u leeyahay qaabeynta nidaam Maaliyadeedka Dowladda, dib u habeynta iyo fulinta, hoggaaminta, qorsheynta istraatijiyada, Maareynta mashaariicda, Wadaxaajoodka Hey’adaha dowladda, Dhisidda hannaanka wadar-oggolka , Hoggaaminta fikrada hal-abuurka, Maaraynta Raasamaalka Maalgalinta iyo Maareynta Xasaradaha mashariicda weyn. In ka badan 30 sano oo khibrad ah waxay ka turjumaysaa diiwaan aad u sarreeya oo ah hoggaamin istiraajiyadeed iyo maareynta isbaddelka maaliyadeed iyo miisaaniyedba.
Mudane Icar, hadda waa lataliye sare ee ka tirsan xafiiska Duqa Magaalada Muqdisho dhinaca horumarinta magaalada iyo siyaasadda. Intii u dhaxeesay 2009-2017 wuxuu ahaa ku Xigeenka Duqa ee arrimaha bulshada, iyo sidoo kale ku Xigeenka Duqa ee Maamulka iyo Maaliyadda Gobolka Banaadir. Waxaa kale uu soo qabtay jagada Agaasimaha Shaqaalaha ee Xafiiska Madaxweynaha. Wuxuu leeyahay khibrado badan oo la xiriira howlgalka dowladda, adeega dadweynaha iyo maareynta hantida dadweynaha iyo maalgelinta. Guulihiisa ugu waaweyn ee uu suuragaliyay waxaa ka mid ah dib u dhiska iyo yagleelidda howl-qabadka 17ka degmo ee Gobalka Benaadir, qaabeeynta howlgallada nadaafadda, dhismaha iyo howlgalinta xafiiska diiwaangalinta.
LIIN XASAN Marwo LIIN XASAN waa ganacsato caan ah iyo samafale deggan magaalada Muqdisho. Marwa Liin waxay caan ku tahay soodajinta iyo dhoofinta cuntada, xoolaha nool, wax soosaarka dalkan iyo horumarinta hantida maguurtada ah. Marwo Liin, dahab ayey ka bilowday ganacsigeeda, 30-kii sano ee la soo dhaafay waxay waddanka ka hirgalisay adeegyo ganacsi oo kala duwan. Marwo Liin waxay waayo’aragnimo ballaaran u leedahay arrimaha la xiriira maalgashiga, ganacsiga, dhoofinta iyo soo dajinta. Hal-abuurkii ugu danbeeyay ee ay ka hirgaliso dalka waa warshadaha sisinta iyo saliidda. Waxay sidoo kale kaalin hormuud ah ka geysataa hirgalinta mashruuca samafalka deegaanka Warjirow oo hoos yimaada Degmada Balcad ee Gobalka Shabeellada Dhexe kaasi oo ah ah marshruuc iskugu jira caafimaad, waxbarasho iyo quudin agoon iyo dad tabardaran. Waayo’aragnimadeeda horumarka, xirfaddeeda, xiriirkeeda, iyo waxtarkeeda wuxuu istratijiyad u ahaan doonaa hiigsiga iyo kobaca GSM.
Mr. Abdirashid Ainanshe
Mudane Caynaanshe waa ku xigeenka Rugta Ganacsiga Soomaaliya muddo 9 sanadood ah. Kaalintiisa shaqo ee Rugta Ganacsiga waa xiriirka bahda ganacsiga iyo hay’adaha dowladda iyo kuwa caalamiga. Mudane Caynaanshe sidoo kale waa madaxa warfaafinta (CCO) ee Hormuud Telecom iyo xubin ka mid ah guddi ka tirsan dhowr shirkadood ay ka mid yihiin Jazeera oo ka shaqeysa xannaanadda iyo dhoofinta xoolaha, Jazeera Real State, FISO Takaful iyo Somali Peace Line (SPL) iyo xilal kale oo sare. Sidoo kale waa aasaasaha Iskaashatada Tigad oo ah iskashato ka shaqeysa macdan qodista iyo Adeegga Saadka Sole (SLS).
Copyrights © 2020 GSM BUSINESS SOLUTIONS | All Rights Reserved.